Deg-Deg: Lyon oo ku dhawaaqday inay joojisay wada hadalada uu Nabil Fekir ugu dhaqaaqi lahaa Liverpool – Gool FM
Deg-Deg: Lyon oo ku dhawaaqday inay joojisay wada hadalada uu Nabil Fekir ugu dhaqaaqi lahaa Liverpool
(Liverpool) 09 Juunyo 2018. Kooxda Faransiiska ah ee Lyon ayaa ku dhawaaqday inay joojisay wadahadaladii uu Nabil Fekir ugu dhaqaaqi lahaa garoonka Anfield ee kooxda reer England ee Liverpool suuqa xagaaga.
Lyon ayaa war rasmi ah ay arintan kasoo saartay ku sheegtay “wadahadalada seddex geesoodka ahaa ee u dhaxeeyay kooxaha Lyon, Liverpool iyo Nabil Fekir ayaa istaagay”.
Nabil Fekir ayaa tijaabada caafimaadka ah u maray Liverpool waxaana uu wareysi la yeeshay kanaalka rasmiga ah ee Premier League ka hor inta aysan Lyon si rasmi ah u hakin wadahadalada.
Sida laga soo xigtay ilo saxaafadeed, Lyon ayaa u joojisay wadahadalada sababa la xiriira in Liverpool ay hoos u dhigtay dalabkeedii ahaa 60 milyan euro ka dib markii tijaabada caafimaadka uu u maray xidiga reer France.
Liverpool ayaa laga yaabaa inay mar kale ku laabato wadahadalada ay ku dooneyso saxiixa Nabil Fekir, sababa la xiriira in wali ay raacdo ugu jirto badalka kubad qaabeeyahoodii hore ee reer Brazil ee Philippe Coutinho kaasoo kaga biiray Barcelona suuqii lasoo dhaafay ee bishii January.
Didier Deschamps oo xiiseenaya inuu kala ogaado mustaqbalka Griezmann iyo Thomas Lemar kahor khamiista soo aadan
Carlo Ancelotti oo bar-tilmaameed ka dhiganaya xidiga kooxda Bayern Munich Sebastian Rudy